အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: အပြည့်အဝ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် လိုအပ်သည်
၎င်းကိုမည်သူအသုံးပြုနိုင်သနည်း။ : မည်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဟော်မုန်းများ? : ဟော်မုန်းကင်းသော
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ။
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: မှားနိုင်ချေများ၊ သုတ်မထွက်မှီ ဆွဲထုတ်ရမည်။
၎င်းကိုမည်သူအသုံးပြုနိုင်သနည်း။ : ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်အတွက်
ထိရောက်မှု: အသုံးပြုသူအပေါ်မူတည်။ အခြားနည်းလမ်းများမှာပိုမိုထိရောက်မှုရှိသည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို နေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ရမည်။
၎င်းကိုမည်သူအသုံးပြုနိုင်သနည်း။ : အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: လိင်ဆက်ဆံမှုမတိုင်မီ အသုံးပြုရန် အမြဲတမ်းသတိရရမည်။
ထိရောက်မှု: ပုံမှန်အသုံးပြုပါက အတန်အသင့်ထိရောက်။ သုတ်ပိုးသတ်ဆေးဝါးအသုံးပြုရန် အကြံပြုခဲ့သည်။
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : ယားယံနိုင်ချေ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: အဲဒါကိုသုံးပြီး မေ့လိုက်ပါ
၎င်းကိုမည်သူအသုံးပြုနိုင်သနည်း။ : အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ ၎င်းကို အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အတွက် မျိုးဥပြွန်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားများအတွက် vasectomy သုတ်ကြောဖြတ်ခြင်း ဟုသိကြသည်။
ဟော်မုန်းများ? : ဟော်မုန်းမပါ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုလိုအပ်
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ရာတွင် ရေရှည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ။ အမျိုသားသားကြောဖြတ်ရာတွင် ခဏတာနာကျင်မှု၊ ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် သွေးချေဥခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အချို့တွင်မူ ကြာရှည်အနဲငယ်နာကျင်မှုရှိသည်။ သားကြောဖြတ်ခြင်းပုံစံနှစ်မျိုးလုံးတွင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် အာရုံခံစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။
ထိရောက်မှု: အလွန်ထိရောက်သော။ ပုံမှန်နည်းလမ်းများက ပို၍သေချာစေသည်
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: သင်သည် အဓိကတာဝန်ခံဖြစ်သည်၊ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသုံးပါ။
ဟော်မုန်းများ? : ဟော်မုန်းဆိုင်ရာ
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : ပျို့အန်ခြင်း၊ ပုံမမှန်ရာသီသွေးဆင်းခြင်းနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
ထိရောက်မှု: ပုံမှန်အသုံးပြုပါက အတန်အသင့်ထိရောက်။
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ။ လူအချို့တွင် အရေပြားယားယံခြင်း သို့မဟုတ် ဓါတ်မတည့်၍တုံ့ပြန်မှုများရှိနိုင်သည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: ခြင်း: လိင်ဆက်ဆံမှုမတိုင်မီ အသုံးပြုရန် အမြဲတမ်းသတိရရမည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: အဝိုင်းကွင်းကို တစ်လတစ်ကြိမ် အစားထိုးရမည်။
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : ပထမလအနည်းငယ်အတွက် ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ သွေးဆင်းခြင်း၊ ထို့နောက် နဲပါးလာပြီး ပုံမှန်သွေးဆင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: အပတ်စဉ် ကပ်ခွာပြားအသစ် အသုံးပြုရမည်။
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : ပထမလအနည်းငယ်အတွက် ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ သွေးဆင်းခြင်း၊ ထို့နောက် နဲပါးလာပြီး ပုံမှန်သွေးဆင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အရေပြားယားယံနိုင်ချေ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: ၁၊၂ သို့မဟုတ် ၃ လတိုင်း တစ်ကြိမ်ဆေးထိုးရမည်။
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : များသောအားဖြင့် ရာသီလာလျှင် နဲပါးပြီးတိုတောင်းသည် သို့မဟုတ် အကြိမ်ရေ လျော့နည်းတတ်သည်။ သွေးစက်ကျခြင်း နှင့် မမျှော်လင့်ဘဲသွေးဆင်းနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။ ၎င်းသည် အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှု - နေ့စဉ်ဆေးသောက်ရမည်။
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : မမျှော်လင့်ပဲ သွေးနဲနဲဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် သွေးစက်ကျခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်၊ အချို့အမျိုးသမီးများတွင် စလျှင်စခြင်း ခေါင်းအနဲငယ်ကိုက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အစာအိမ်မသက်မသာဖြစ်ခြင်းတို့ ရှိနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : မမျှော်လင့်ပဲ သွေးနဲနဲဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် သွေးစက်ကျခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် လစဉ်ရာသီလာခြင်း ရပ်တန့်နိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း: ခြင်း: အဲဒါကိုသုံးပြီး မေ့လိုက်ပါ
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း နာကျင်မှုအချို့။ ထည့်သွင်းပြီးနောက် ရာသီများများလာခြင်းကို ခံစားရနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။
အဖြစ်များသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ : - ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း နာကျင်မှုအချို့။ သွင်းပြီးနောက် သင်တွေ့ရနိုင်သည်မှာ - သွေးစက်ကျဆင်းခြင်း၊ အောင့်ခြင်း၊ ရာသီလာနဲခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝမလာြခင်း ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက အန္တရာယ်မရှိပါ။